Vanhu Vokandirana Makobvu neMatete paMari Inonzi Yakapihwa Pachena VaMnangagwa neVamwe neRBZ
Munyika maita kukandirana makobvu nematete mushure mekunge rimwe gweta Doctor Alex Magaisa vaburitsa mazita evanhu vanonzi vakapihwa mazidzamatsama emari nebhanga guru renyika reRBZ kuti vatenge zvikwanisiro zvekurima.
Mari yakashandiswa inonzi inosvika zviuru mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million mumakore ekuma 2007 na 2008.
Kunyangwe hazvo mumakore ose aya vaive gavhuna weRBZ VaGideon Gono vaibuda mumapepanhau akaita seHerald neNewsday vachiti ichi chaive chikwereti, asi neSvondo vange voimba rumwe rwiyo mubepanhau reSunday Mail vachiti ichi chaisava chikwereti asi vanhu ava vakangopihwa mari iyo yave kunzi veruzhinji vabhadhare kuburikidza nemutero mushure mekunge hurumende yatora chikwereti ichi.
Vamwe vakawana mari iyi vanosanganisira mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakapihwa mari inodarika zviuru mazana mana kana kuti US$400,000.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri waVaMnangagwa VaGeorge Charamba kana munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko VaNick Mangwana avo tatumira mashoko paWhatsApp avasina kupindura.
Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter VaMangwana varatidza kusafara nekuti Doctor Magaisa vanenge vakatema vakarerekera rimwe divi sezvo vasina kuburitsa mamwe mazita. Asi VaMagaisa vakataura kuti vane zvimwe mugapu mavo zvavachapakura mazuva anotevera.
Vanhu vakawanda vaburitswa mazita inhengo dzeZanu-PF vakawanda vari makurukota vamwe vaive makurukota munguva yevaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe. Vakuru vemakerereke vanowanzobuda vachitsigirawo bato reZanu-PF nevatongi vematare vakawanda varipowo pavanhu vakapihwa mari iyi.
VaGono, VaTemba Mliswa nhengo yeNorton yakazvimira uye vanomiririra Makonde mudare reparamende VaKindness Paradza havanawo kupindura chikumbiro cheStudio 7 chekutaura navo nezvenyaya iyi sezvo vari kunzi vakapihwawo mari iyi.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu-PF VaTafadzwa Mugwadi vavimbisa kutipa divi rebato ravo asi hatina kukwanisa kunzwa kwavari kusvika taenda pamhepo.
Asi Studio 7 yabata VaKudakwashe Bhasikiti avo vati ichi chaive chikwereti uye vakachidzosera.
Pandemutande reTwitter VaBhasikiti nevamwe vange vokandirana makobvu nematete vamwe vachiti ichi chaisava chikwereti zvakapa kuti vamwe vabve vadya magaka mambishi vachiti huori hwanyanya munyika.
Vanokokera mabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa VaAlois Chaumba vanoti vanhu vose vakapihwa mari ava vanhu vanowana vaisada kana rubatsiro zvikuru mari iyi ichizobhadharwa nevarombo.